Sidee Baa Loo Qoraa oona Loo Turjumaa Wargeysyada Markhaatiyaasha Yehowah?
Sidee Baa Loo Qoraa oona Loo Turjumaa Wargeysyadeenna?
Qaybta Qoraalka, Mareykanka
Qormadeenna 750 oo luqadood baan ku turjumnaa sidaan sida ugu fiican “quruun kasta iyo qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta” ugu naadino warka wanaagsan. (Muujintii 14:6) Sidee baan hawshan adag u fulinaa? Waxaa nagu caawiyo qorayaal caalamka oo dhan joogo iyo turjumayaal hawshan u goʼan. Kulligood waxay ka mid yihiin Markhaatiyaasha Yehowah.
Ugu horrayn qoraalka waxaa lagu diyaariyaa af Ingiriis. Guddiga Maammulka baa kor ilaaliya hawlaha Qaybta Qoraalka oo ku sugan xarunta maammulka ee dunida. Qaybta Qoraalka waxay abaabushaa hawlaha ay qabtaan qorayaasha u adeego xarunta maammulka iyo laamaha qaarkood. Sida loo suuraggeliyo ka hadalka arrimaha dhaqamada kala duwan qorayaasheenna adduunka oo dhan bay joogaan. Sidaas daraaddeed quruumaha oo dhan baa wargeysyadeenna xiiso u leh.
Kaddibna qoraalka waxaa loo diraa turjumayaasha. Marka qoraalka la saxo oo la fasaxo kombiyuutar baa loogu diraa kooxyada turjumo oo meel walba jooga. Kooxyadan way turjumaan qoraalka markaana way hubiyaan oo hagaajiyaan. Aad bay ugu dadaalaan inay luqaddooda ku helaan erayo saxan oo af Ingiriiska la micne ah.—Wacdiyahii 12:10.
Kombiyuutarro baa hawsha deddejiyo. Kombiyuutar ma qaadan karo booska qorayaasha iyo turjumayaasha binuʼaadanka ah. Laakiinse hawshooda buu dhaqsi ka dhigi karaa markay isticmaalaan qaamuusyo kombiyuutarka ku jiro, barnaamijyo baadhitaanka loogu talaggalay iyo qalabyo luqadaha saxo. Markhaatiyaasha Yehowah waxay soo saareen barnaamij gooni ah oo luqado badan oo af Ingiriis MEPS lagu yiraahdo. Barnaamijkan boqolaal luqadood baa lagu isticmaali karaa oo sawirro buu qoraalka ku biiriyaa si qormada daabacaad loogu diyaariyo.
Yehowah “wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan.” (1 Timoteyos 2:3, 4) Sidaas daraaddeed baan aad ugu dadaalnaa inaan luqado badan turjumno. Xitaa luqadaha ay dhowr kun oo qof ku hadlaan.
Sidee baa hawsha qoraalka wargeysyadeenna loo qabtaa?
Maxaan luqado badan ugu turjumnaa qormadeenna?
Wadaag Wadaag Sidee Baa Loo Qoraa oona Loo Turjumaa Wargeysyadeenna?